ဂျယ်ရီ Varghese အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Careers
ဒီဇင်ဘာလတွင် 29, 2017
ဇန်နဝါရီလ 1, 2018
ဒူဘိုင်း Automotive အခွင့်အလမ်းများအတွက်ဂျော့ဘ်
ဒူဘိုင်းအတွက်မော်တော်ယာဉ်ဂျော့ဘ်, သောသင်ရှာဖွေနေသည့်အခါပြောဖြစ်ပါတယ် အသစ်တခုအခွင့်အလမ်းများအတွက်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသင်တို့ဆီသို့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် ယူအေအီးအတွက်အလုပ်လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီများမှ။ ဤအကြောင်းကြောင့်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်းပါးမှာကြည့်ရှိသည်နှင့်ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုင်ပုံကိုထွက်ရှာပါ။ အဆိုပါမော်တော်ကားအလုပ်အကိုင်များလုပ်ငန်းနယ်ပယ်များတွင်အတွေ့အကြုံရှိသည်သူကိုကိုယ်စားလှယ်လောင်းများသည်။
ထိုကြောင့်သင်သည်အောင်မြင်သောအတွေ့အကြုံ 3-25 နှစ်ပေါင်းရှိပါက။ သင်သည်သင်၏နေအိမ်တိုင်းပြည်ပြင်ပမှာနိုင်ငံတကာကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ်ထားရှိခံရဖို့အခွင့်အလမ်းရှိသည်။ အသစ်ကအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေကျွမ်းကျင်သူများ ကာရစ်ဘီယံ, အမေရိကန်, ကနေဒါ, ဆော်ဒီအာရေဗျမလေးရှားနှင့်အတူပင်အာရှနှင့် In-အကြား ပို. ပင်နိုင်ငံများမှ။ ဒီဇင်ဘာလ 2016 မှာတော့ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီ (ယူအေအီး) သည်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာစုဆောင်းမှုစတင်သည်။ ဒါကြောင့်မော်တော်ကားလျှောက်ထားဖို့ကယ့်ကိုထိုက်သည် ဒူဘိုင်းတွင်ဂျော့ဘ်.
Fortune 500 နှင့်ဤအကျိုးတူလုပ်ငန်းဖြစ်သည် ဒူဘိုင်းရှိကုမ္ပဏီများ။ အတူတူယူလာပါ ်ထမ်းခေါ်ယူမှုနှစ်ခု key ကိုဒြပ်စင်။ အဆိုပါမော်တော်ကားစက်မှုလုပ်ငန်းကျိန်းသေဈေးပြောင်းလဲ။ နှင့်သင်တန်း၏, အားလုံးကြင်နာ၏အမှုဆောင်အရာရှိများအတွက်ဖွင့်လှစ်သည်။ နှင့်ဗြိတိန်, အမေရိကန်, အတူအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကြိုဆို အာရှနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ အရောင်းအတှေ့အကွုံနှငျ့အတူ။
ကောင်းစွာ-paid လုပ်ခမှအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အတူ။ အံ့သြဖွယ်ဆုကြေးငွေစနစ်များနှင့်တစ်တွေနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခြင်း ဦးတည်ရာကိုအံ့သြဖွယ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတိုးတက်မှုအခွင့်အလမ်းများ။ ယူအေအီးအထူးသဖြင့် ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအလုပ်လုပ်နေတဲ့အံ့သြဖွယ်ရာအရပျမသာဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်မိသားစုနှင့်လေးတွေနှင့်အတူတစ်ဦးအသက်အဘို့အနည်ထိုင်ဖို့စိတ်လှုပ်ရှားစရာနှင့်တက်ကြွသောအရပ်။
အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မြင့်တက်စုဆောင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်။ ကျွန်တော်တို့၏ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ ယူအေအီးနိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးအချို့နှင့်အတူ ပူးပေါင်း. ဖြစ်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံး Automotive HR မန်နေဂျာများလေးစားခြင်းနှင့်ရှာဖွေစုဆောင်းငှားရမ်း။ မှတ်မိဖို့ပထမဦးဆုံးအရာကျနော်တို့ကတခြားနှင့်အတူ ပူးပေါင်း. သာဖြစ်ပါတယ် ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီများ။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လက်ရှိမော်တော်ကားစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရနိုင်သူကိုသစ်ကိုကိုယ်စားလှယ်လောင်းရှာကြ၏။
ကျနော်တို့လက်ရှိအဘို့ကိုစုဆောင်းနေကြသည် စက် ကုန်သွယ်ရေးယူအေအီးအတွက်မန်နေဂျာကိုကြုံခဲ့ရသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင် Front-line ကိုဝန်ထမ်းမန်နေဂျာအဖြစ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတှေ့အကွုံရှိပါက။ မော်တော်ကားနည်းပညာရှင်အတွေ့အကြုံကိုအတူ။ သင်ကယူအေအီး, ကာတာသို့မဟုတ်ဆော်ဒီအာရေဗျအပေါ်ထားရှိနိုင်ပါသည်။ သငျသညျပိုမိုမြင့်မားလုပ်ခရှာဖွေနေမယ်ဆိုရင်သို့သော်ကျနော်တို့ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီနှင့်အတူအထူးသဖြင့်သင်ကူညီနိုင်သည်။ ဥရောပ, အမေရိကန်နှင့်ကနေဒါကြုံတွေ့ အခွက်တဆယ်နှင့်အတူကိုယ်စားလှယ်လောင်းမြင့်မားသည့် GCC နိုင်ငံများတွင် rated နေကြတယ်။ ဒီဧရိယာအနှံ့မှတ်, ငါတို့အတွေ့အကြုံများကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုကူညီဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ နှင့် HR မန်နေဂျာများမှကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကယ်တင်တတ်၏ အားလုံး Automotive အမှတ်တံဆိပ်၏။
ဤသည်နေ့ရက်ကာလတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် တိုင်းကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအတွက်အလွန်အမင်းယှဉ်ပြိုင်စျေးကွက်။ ကျနော်တို့ထုတ်လုပ်သူများအတွက်ငှားရမ်းကြသည်စတင် ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့အလုပျသမား။ ဒါ့အပြင်စွမ်းဆောင်ရည်ညွှန်းကိန်းကိုယ်စားလှယ်လောင်းများရှာဖွေနေ။ သငျသညျဘဏ္ဍာရေးနှင့်အာမခံအတွေ့အကြုံရှိပါကထို့အပြင်ကျနော်တို့ဘုတ်အဖွဲ့ပေါ်တွင်သင်ရပေမည်။ သင်တန်း၏, ငါတို့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကိုရှာဖွေနေ ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအတှေ့အကွုံနှငျ့အတူ။ အတူတူအဘို့ကို manual လုပ်သားများနှင့်အတူ မော်တော်ယာဉ်အင်ဂျင်နီယာအလုပ်အကိုင်.
ရှာဖွေစုဆောင်းနှင့် GCC နိုင်ငံများအတွင်းကုန်သည်အုပ်စုများကြောင်းဖော်ပြထားခြင်းဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ ပြီးပြီ အိန္ဒိယနှင့်ပါကစ္စတန်လုပ်သားများငှားရမ်း။ သငျသညျယူအေအီးကုမ္ပဏီများနှင့် ပူးပေါင်း. ရှာနေလျှင်အခြားတစ်ဖက်တွင်ဒါ။ သင်တို့သည်ဤကုမ္ပဏီများသည်ကိုသင်ပူဇော်နိုင်သလဲဆိုတာကြည့်ကြသင့်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, ဒူဘိုင်းအတွက် Porshe ပြီးသားသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုဖြတ်ပြီး key ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုရာထူးများတွင် Non-စော်ဘွားန်ထမ်းများငှါး၏။ အဖြစ်မှန်မှာတော့အပြစ်ကိုမဖုံးလည်းမရှိ သင်တို့အဘို့အသငျသညျအလုပ်အကိုင်များရှာဖွေလျှင် မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍအတွက်။
GCC နိုင်ငံများနှင့်ဦးဆောင် Automotive အေဂျင်စီ
အဆိုပါကားကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလျှင်မြန်စွာယူအေအီးကြီးထွားလာနေပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, သငျသညျကနေအကျိုးခံစားခွင့်ရဖို့နဲ့လိုအပ်သောအတွေ့အကြုံကိုရယူခံစားနိုင်ပါသည်။ ရိုးရိုးသားသား တစ်ဦးကောင်းကုမ္ပဏီအတွက်တည်ငြိမ်အနေအထားတွင်ထားရှိခံရဖို့။ သငျသညျခိုငျမာကျွမ်းကျင်မှုနှင့်မော်တော်ယာဉ်အသိပညာရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကြောင်းကိစ္စတွင်ခုနှစ်, GCC ကုန်သည်တွေနှင့်သင့်အနာဂတ်အလုပ်ရှင်များဖြစ်ကြပါသည် သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှသာအကောင်းဆုံးကိုယ်စားလှယ်လောင်းများဆောင်ခဲ့.
သူတို့အခွအေနမြေိုးကိုသင်မိတ်ဖက်ဖို့ရှာဖွေနေ start သငျ့သညျ။ ဦးဆောင်မော်တော်ကားအေဂျင်စီများနှင့်အတူ CCC နိုင်ငံများရှိ။ 2018 မှတက် 2020 ကျိန်းသေစားပွဲပေါ်မှာမှဦးဆောင်ကုမ္ပဏီများသည်ဆောင်ခဲ့မည်အကြောင်းအဓိကနှစ်ပေါင်းဖြစ်လာသည်။ ဒီတော့အခါသင် ဒူဘိုင်းမြို့တစ်ထမ်းရှာဖွေသူနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်။ သငျသညျခြွင်းချက်နှင့်ကောင်းစွာ Oriental နှစ်ဦးစလုံးဟာသူတို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုရှာဖွေသင့်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်မော်တော်ယာဉ်အရောင်းအလုပ်အကိုင်များသည်။
နိုင်ငံတကာအခွက်တဆယ်စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်မော်တာကုန်သွယ်မှုအမှုဆောင်အရာရှိ။ အကျိုးဆက် အဆိုပါ GCC ကနေအသစ်အခွက်တဆယ်ကိုရောက်စေ ပင်လယ်ကွေ့ဒေသမှာရှိတဲ့မော်တာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ သင်ကယူအေအီးအတွက်ထိပ်တန်း rated မော်တော်ကားကုမ္ပဏီများကဆက်သွယ်အခမဲ့ခံစားရသင့်တယ်။ ချက်ချင်းကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း Upload လုပ်ပါ အသစ်တခုအခွင့်အလမ်းများအတွက်ဒူဘိုင်းအဖွဲ့အစည်းများ။ သင်ပင်သူတို့ကိုခေါ်သူတို့ကိုမေးနိုငျ မည်သို့ကွဲပြားခြားနားသောချဉ်းကပ်နည်းဟာသူတို့ရဲ့ HR မန်နေဂျာ။ ်ထမ်းခေါ်ယူမှု၏ဤအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း Research ၏ရလဒ်အဖြစ် သေချာဘို့သင့်ကိုအသစ်သောအလုပ်အကိုင်ရရှိရန်ကူညီပေးနိုင်ပါသည် ကားကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွင်း။
အကောင်းဆုံးကိုကုမ္ပဏီများအတွက်လျှောက်ထားဖို့ဘယ်လို GCC အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း?
အဆိုပါ GCC အတွက်အခွင့်အလမ်းများကိုအခြားနိုင်ငံများမှတုနှိုင်းလို့မရနိုင်တဲ့ဖြစ်ကြသည်။ သငျသညျလစဉ်လတိုင်းဟာအလွန်တက်ကြွသောဆုကြေးရရှိနိုင်သည်။ ထို့အပြင်အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအနေအထားဆိုတော့သင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကို, တိုးမြှင့်စျေးကွက်ကြီးထွားလာ။ နှင့် မှတ်မိကားမောင်းကုမ္ပဏီ ထိုကဲ့သို့သော Porsche သို့မဟုတ် Ferrari ပြိုင်ကားအဖြစ်။ နှင့်အခြားသောလက်ပေါ်, အသစ်စက်စက်ကားများမြှင့်တင်ရေးတို့အတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။
အခါတိုင်းသင် HR မန်နေဂျာနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်ပါလိမ့်မည်။ တဦးတည်းအချက်နှင့်အတူ အဆိုပါငှားရမ်းမန်နေဂျာအထင်ကြီးဖို့ကြိုးစား သင်သည်တတ်နိုင်သလောက်။ စိတ်ထဲ၌ဤဖြစ်စဉ်မှတဆင့်အဆက်အသွယ်ရတဲ့နှင့်အတူအောင်မြင်မှုတစ်ခု 50% ဖြစ်ပါတယ်။ HR မန်နေဂျာများအနေဖြင့်ပုံမှန် update ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ကြိုးစားပါ။ နှင့်သင်တန်း ယူအေအီးအသစ်ထူးခြားသောအလုပ်ကြော်ငြာရှာဖွေမှု မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများ။ သငျသညျမှရရှိနိုင်ဖြစ်ကြောင်းအမြဲတမ်းဖော်ပြ သငျသညျနိုင်ငံတကာကိုယ်စားလှယ်လောင်းလျှင်ယူအေအီးမှရွှေ့.
အမြဲတမ်းပေးအပ်မဆိုအခန်းကဏ္ဍများတွင်တက်ကြွစွာဖြစ်ခြင်းနှင့်ဖုန်းဖြင့်ပင်ကျော်အပေါငျးတို့သအင်တာဗျူးဖြစ်စဉ်ကိုဖြတ်သန်းရတယ်။ သငျသညျတိုင်းပညာရှင်ပီသစွာကိုင်တွယ်လိမ့်မယ်သေချာအောင်လုပ်ပါ သင်ငှားရမ်းမန်နေဂျာသို့မဟုတ်ထမ်းရှာဖွေသူအနေဖြင့်အရကိုခေါ်။ ရှေ့ဆက်အချိန်ဖြစ်ခြင်းနှင့်ကုမ္ပဏီက်ဘ်ဆိုက်ကနေသတင်းအချက်အလက်အချို့ကိုစုဆောင်းရန်ကြိုးစားပါ။
တစ်ကြီးထွားလာကားတစ်စီးစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အများစုကဆွဲဆောင်မှုသက်သေအထောက်အထားအလုပ်အကိုင်ရာထူးများ၏အရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သျောလညျး သင်တစ်ဦးရှည်လျားသောအလုပ်အကိုင်သမိုင်းရှိပါက။ ထိုအခါစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အကြီးတန်းမန်နေဂျာနှင့်ဦးဆောင် key ကိုမန်နေဂျာဖြစ်လာမယ့်ခိုင်မာတဲ့အလိုဆန္ဒ။ သငျသညျရှေ့ကိုမောင်းနှင့်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီများအတွက်လျှောက်ထားသင့်ပါတယ်။ ထိုသို့သော Audi, Mercedes, Maserati အဖြစ်နှင့် CEO ဖြစ်သူအနေအထားမှတက်က forward သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရွှေ့။
လျှောက်ထားရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအောက်ပါညွှန်ကြားချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုချင်းစီမှတဆင့်သွားပြီးသူတို့ကိုရန်သင့် updated CV ကိုပေးပို့။ ထိုအခါဖြစ်ပျက်ဖို့မှော်အဘို့အစောင့်ပါ။ တစ်ခုတည်းသောအရာကိုသင်ရပ်တန် အမြင့်ဆုံးအဆင့်အထိသင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရွှေ့ဖို့သငျသညျပါ!.
ဒူဘိုင်းအတွက်သင့်နယူးအလုပ်ရှာဖွေရေး & Automotive ဂျော့ဘ်သည် Apply
ဒူဘိုင်းအတွက် Automotive ဂျော့ဘ်များအတွက် Apply
ဒူဘိုင်းအတွက် Porsche အလုပ်ရှာဖွေရေး
ဤတွင် Apply: https://www.porsche.com/middle-east/_dubai_/aboutporsche/jobs/
ဒူဘိုင်း Porsche ကိုအကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီများ၏တစ်ခုဖြစ်သည်။ သငျသညျစတငျနိုငျ အရောင်းအတိုင်ပင်ခံအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း, တယ်လီဖုန်းအော်ပရေတာသို့မဟုတ်ဧညျ့ကွိုအနေအထား။ သို့မဟုတ်သင်အဖြစ်အနေအထားကိုစတင်နိုင်ပါသည် အရောင်းအတိုင်ပင်ခံ။ Porshe အတွက်ဂျော့အမြဲစျေးကွက်ရှာဖွေရေးပါဝငျသညျ။ လူတိုင်းကြောင်းအားကစားကားတစ်စီးအကြောင်းကိုအိပ်မက်။ Porsche နှင့်အတူ, သငျသညျအံ့သြဖွယ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖန်တီးနိုင်ပါတယ်.
မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းကိုဒူဘိုင်းအတွက်အခွင့်အလမ်းများကိုဖန်တီးပေးလျက်ရှိသည်။ နှင့်ဒေသခံအတွင်းဆောင် generate ဒူဘိုင်း၌စျေးကွက် နှင့်အဘူဒါဘီ။ Porsche တစ်ခုထောက်လှမ်းရေးစွမ်းဆောင်ရည်စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ကရှိပါတယ်။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်သင်၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုကူညီပေးဖို့အဆင်သင့်ရှိပါတယ်။ Porsche ကုမ္ပဏီကအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်ပဲသီးသန့်အားကစားကားထုတ်လုပ်သူထက်အများကြီးပိုပါတယ်။
အဆိုပါကုမ္ပဏီအစဉ်မပြတ်ကားစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အသစ်သောစံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ခြင်း။ ဒါကကုမ္ပဏီကအကောင်းဆုံးအရောင်းမန်နေဂျာနှင့်ဝန်ထမ်းတဦးအပါအဝငျ။ သငျသညျထူးခြားတဲ့ယာဉ်များတည်ဆောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီကုမ္ပဏီသင်တို့အဘို့ကောင်းလှ၏။ ဒါကကုမ္ပဏီ အမြဲကအရမ်းထူးခြားတဲ့သူတို့ရဲ့ဝန်ထမ်းရဲ့တစ်ခုခုပူဇော်။ အကျိုးဆက်အသစ်သောကိုယ်စားလှယ်လောင်းများငှားရမ်းခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုရာထူးမှသူတို့ကိုလာပြီ။
Porsche ဒူဘိုင်းအတွက်အစာရှောင်ခြင်းတိုးတက်နေသောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကြောင်း၏ထိပ်တွင်, သူတို့ကခိုင်မာတဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအတွေးအခေါ်များရှိသည်။ လူတိုင်းန်ထမ်းလုပ်ပေး တန်ဖိုးများနှင့်ဒဿနများအတွက်သုတေသနပြု။ ထိုအသင်ဤကုမ္ပဏီနှင့်အတူအလုပ်သစ်ရသင့်ပါတယ်။ ယူအေအီးအတွက်မော်တော်ယာဉ်အင်ဂျင်နီယာအလုပ်အကိုင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် အလုပ်သစ်ရှာဖွေသူများအဘို့ရှင်းလင်းစွာစိတ်ကူး.
အဘယ်ကြောင့် Porsche ဒူဘိုင်းမြို့တော်တွင်?
ဒူဘိုင်း Porshe ကုမ္ပဏီတစ်ခုဝန်ထမ်းခွင့်ပြု စစ်မှန်တဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖှံ့ဖွိုးတိုးဆက်လက်ရှိနေရန်။ အဓိကအဖွဲ့အစည်းကိုအခြေခံမူမြင့်မားသောတောင်းဆိုချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ရှိပါတယ်။ ခဲ့အဖြစ်မှတ်ချက်ပြုကုမ္ပဏီသူတို့ကိုယ်သူတို့ဂုဏ်ယူသည်။ အဘယ်သူမျှမကိစ္စကိုသင်တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာအနေအထား။ ထိုအပေါ် အဘယ်အရာကိုအခြားသူများကဒူဘိုင်းအတွက်စီမံခန့်ခွဲခြင်းဖြစ်ကြောင်း.
ကျိန်းသေ, Porsche အမြန်ဆုံးကြီးထွားလာကုမ္ပဏီဖြစ်ခြင်းကတိပြုပါတယ်။ ဒါကကော်ပိုရေးရှင်း 2018 အတွက်စဉ်ဆက်မပြတ် HR ကန့်သတ်ပြန်ပြီးအဓိပ္ပာယ်။ သူတို့ကအစကုန်စည်ပြပွဲ 2020 အသစ်အလုပ်အကိုင်များကိုသတ်မှတ်။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, ကုမ္ပဏီ၏ဒူဘိုင်းအသစ်စံချိန်စံညွှန်းထားကြ၏။
နောက်ဆုံးပေါ် Porsche မော်တော်ယာဉ်များကိုလျင်မြန်စွာအမြဲအထူးတစ်ခုခုဖြစ်လာသည်။ Porsche လည်းရောင်းအားအသင်းထံမှထူးခြားသောရလာဒ်များကိုခန့်မှန်းထားသည်။ ကကုမ္ပဏီ၏အမြတ်အစွန်းမှကြွလာသောအခါသူတို့ကမြင့်မားရောင်းအားအလံကို setting ။ ဒီအတွက်ကြောင့်, ကုမ္ပဏီဖို့ကြိုးစားနေ မြင့်မားစံနှုန်းထက်ပိုမိုအောင်မြင်ရန်။ ယင်းအတွက်ယနေ့ Porsche နဲ့အလုပ်အကိုင်အရယူခြင်းနှင့် အနာဂတ်ကိုအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်.
သူတို့အခွအေနမြေိုး, ကုမ္ပဏီတကယ်န်ထမ်းများနှင့်မန်နေဂျာများအပေါ်မှီခိုနေရသည်။ သင်ဤကုမ္ပဏီအတွက်အလုပ်လုပ်နေလျှင်ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော။ သင်လုပ်ဖို့ ... လိုပါတယ် အမြဲ ကြောင်းအပိုမိုင်သွားဖို့ဆန္ဒရှိ အရောင်းပစ်မှတ်ရောက်ရှိဖို့။
Porshe - ဒူဘိုင်းအတွက် Automotive ဂျော့ဘ်များအတွက် Apply
အလုပ်ရှာဖွေရေး Ferrari ပြိုင်ကားကော်ပိုရေးရှင်းဒူဘိုင်း
ဤတွင် Apply: http://corporate.ferrari.com/en/career
Ferrari ပြိုင်ကားနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီတဦးချင်းဝန်ထမ်းသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်အပြင်းထန်ဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့အခွအေနမြေိုး, Ferrari ပြိုင်ကားသူကိုတတ်နိုင်သမျှကိုယ်စားလှယ်လောင်းများရှာဖွေနေ အရောင်းနှင့်အမြတ်အစွန်းအခွင့်အလမ်းများတိုးမြှင်။ ထိုအညာဘက်ဒီအီတလီကုမ္ပဏီစီမံခန့်ခွဲခြင်း။
သငျသညျစီမံခန့်ခွဲမှုရာထူး၌ရှိကြ၏လျှင်သို့သော်သင်သည်ထူးချွန်ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ Ferarri သငျသညျအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကဲ့သို့အခံစားရသင်သည်ထိုသူတို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်နေစဉ်ကြီးမားတဲ့မိသားစုအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ထည့်မပြောပါနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်အခွင့်အလမ်းများကိုများအတွက်အလားအလာ။ သင်တို့သည်အားကြီးသောဆက်သွယ်ရေးနှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်သင့်သည်။ ကြောင်း၏ထိပ်တွင်, သင်သည်သင်၏ကားကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံကိုမျှဝေရပါမည်။ နှင့်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းသင့်ရဲ့တိုးတက်အောင် အကောင်းဆုံးရလဒ်များအတွက်အရည်အချင်းများနှင့်အတူကျွမ်းကျင်မှုအတူတူ.
အဆိုပါကုမ္ပဏီစုဆောင်းမှုဖွဲ့စည်းပုံ၏အားကြီးသောသဘောမျိုးရှိပါတယ်။ ယခုအချိန်တွင်သူတို့ 70th နှစ်မြောက်စိန်ခေါ်မှုနှင့်အတူမေတ္တာ၌ဖြစ်ကြ၏။ ဒီတော့ဒီအချက်တွေကိုသူတို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပေးသောရှာပါစေ သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှု။ နေ့စဉ်သင်သည်တတ်နိုင်ကျွမ်းကျင်မှု၏ကောင်းသောအစုံနှင့်အတူအကျဉ်းချုပ်ရန်။ Ferrari ပြိုင်ကားများ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာချဲ့ထွင်ဘို့သင့်အလုပ်အကိုင်အောင်မြင်မှု Run ဒူဘိုင်းအတွက်ကော်ပိုရေးရှင်း အဖွဲ့အစည်းက။
အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်, Ferrari ပြိုင်ကားကောင်းတစ်ဦးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည် နိုင်ငံတကာအတွက်အလုပ်လုပ်ရန်။ စီမံခန့်ခွဲမှုအသီးအသီးဝန်ထမ်း၏တန်ဖိုးကိုသိတယ်။ ဤအချက်များပေးသောအကောင်းဆုံးတစ်ဦးချင်းချဉ်းကပ်သင်တစ်ဦးစီမံခန့်ခွဲမှုအနေအထားမှရာထူးတိုးရကူညီပေးပါမည်။ ကုမ္ပဏီ ပညာရေးမြင့်တက်အသင်းစွမ်းဆောင်ရည် နှင့်အရောင်း။ ဒါကြောင့်သူတို့ကိုသင်အလုပ်လုပ်ရသောအခါ။ တစ်ခုတည်းသောအောင်မြင်သဘောတူညီချက်ဟာသူတို့ရဲ့န်ထမ်းသူတို့လက်ျာအချိန်တွင်ညာဘက်ရာအရပျ၌ရှိကြ၏ခံစားရတဲ့အခါမှသာဖြစ်ပါသည်။ အချိန်ပေါ်ကောင်းစွာ-paid လုပ်ခလစာနှင့်အနာဂတ်အတွက်ရာထူးတိုးခံရဖို့, လက်ျာပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အတူ။
ဤသည်အီတလီကုမ္ပဏီလည်းယုံကြည်သည် ကားများ၏အရည်အသွေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်အဓိကသဘောတူညီချက်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်း၏ကားများ၏အရည်အသွေးနှင့်အရေအတွက်ကွဲကွာရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ကုမ္ပဏီအထဲမှာဒါကောင်းသောစီမံခန့်ခွဲမှု လူများတို့သည်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်ကြီးထွားလာကူညီပေးသည် အဆိုပါ Ferrari ပြိုင်ကား Corporation မှာ။
ပြုပြင်အခြေအနေများခြွင်းချက်ကျော်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ပါပဲ။ ထိုအခါကုမ္ပဏီအတွင်းရှိပတ်ဝန်းကျင်အားလုံးန်ထမ်းများအတွက်ကောင်းစွာ-ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ နှင့်အရေးအပါဆုံးဦးစားပေးအစဉ်အမြဲနားထောင်ခြင်းနေကြသည်။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကျိန်းသေသည်သင်အကြံပေး သငျသညျတောင်အာဖရိကဆီကနေလျှင်ဒီကုမ္ပဏီတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်စတင်ရန်.
ဤတွင် Apply: https://careers.fcagroup.com/our-brands/maserati-home/
သင်တစ်ဦးအလုပ်တစ်ခုရဖို့ကြိုးစားသင့်နောက်ထပ်အမှတ်တံဆိပ်ကုမ္ပဏီ Maserati ဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးရှင်းတဲ့ဒီကုမ္ပဏီအားကြီးသောအီတလီဇာတ်လမ်းရှိပါတယ်။ အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်, ကားစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ icon ဖြစ်ပါတယ်။ စကားလုံးတစ်လုံးအတွက်, ကြော့ရှင်းဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုကုမ္ပဏီအကြောင်းကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ အသစ် ကြွယ်ဝသောလူနေမှုပုံစံစတဲ့ရန်အနှစ်သာရအတွက်ချဉ်းကပ်မှု။ သငျသညျအရောင်းအတှေ့အကွုံအစိုင်အခဲအနှစ်ရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်မှတ်မိဖို့ပထမဦးဆုံးအရာ။ အလိုအလျောက်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် Maserati အတွက်အလုပ်လုပ်ရန်။ သင်ဤကုမ္ပဏီအတွက်အလုပ်လျှောက်ထားတဲ့အခါ။ ဖြစ်နိုင်ရင် The HR မန်နေဂျာများ အတွေ့အကြုံနှင့်အတူကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေ ဇိမ်ခံအမှတ်တံဆိပ်ပါ။
အရောင်းနှင့်ညှိနှိုင်းကျွမ်းကျင်မှုခြွင်းချက်။ အကောင်းဆုံးကိုအဘို့နှင့်ဘုနျးကွီးသောအမွေအနှစ် အမှတ်တံဆိပ်အောင်ကုမ္ပဏီစျေးကွက်အပေါ်ထွက်ရပ်။ ဒီကုမ္ပဏီနှင့်အတူယဉ်ကျေးမူအကငျြ့နှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခွအေနအေအခြားသောလမ်းထားရန်။ Will အလုပ်တစ်ခုရဖို့သင်ကူညီ။ ဒါကြောင့်သင် Maserati နှင့်အတူတစ်ဦးအနေအထားလျှောက်ထားသောအခါ။ သငျသညျသိသိသာသာကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်အသုံးပြုပုံကိုယ့်ကိုယ်ကိုရောင်းချသင့်ပါတယ် သငျသညျအရောင်းနှင့်အမြတ်အစွန်းအခွင့်အလမ်းများတိုးမြှင်နိုင်ပါတယ်.
ဒါကြောင့်သင် Maserati နှင့်အတူအလုပ်လုပ်နေစဉ်။ သင်လုပ်ဖို့ ... လိုပါတယ် အသစ်သောစွမ်းရည်ကျွမ်းကျင်မှုကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် high-ဖိအားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်လုပ်ဆောင်, ကုမ္ပဏီဒါမြင့်မားသောအသံအတိုးအကျယ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်လည်ပတ်နေတဲ့ဥရောပကုမ္ပဏီကားတစ်စီးသင်၏အချိန်ခံထိုက်ပေ၏။ သူတို့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းက်ဘ်ဆိုက်အဘို့အ Apply နှင့်ပိုပြီးထွက်ရှာတွေ့ သူတို့နှင့်အတူအခွအေနေအလုပ်လုပ်အကြောင်းကို။
သငျသညျနိုင်သလားပစ္စုပ္ပန်နှင့်မော်တော်ယာဉ်များတန်ဖိုးများကိုသရုပ်ပြ ?. အဖြေဟုတ်ကဲ့ဒါဆို Maserati တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် အကယ်. သင်တို့အဘို့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ကုမ္ပဏီ။ အဆိုပါကုမ္ပဏီအချိန်ကြာမြင့်စွာလွန်ခဲ့တဲ့ operated နှင့် 1st ဒီဇင်ဘာလ 1914 ခဲ့တော့တာပဲ။ ထိုအချိန်မှစ. ကုမ္ပဏီလျင်မြန်စွာတစ်ခုသီးသန့်အီတလီကားထုတ်လုပ်သူဖြစ်လာသည်။ မှတ်မိဖို့ပထမဦးဆုံးအရာဟာကုမ္ပဏီသမိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ တည်ထောင်သူ Alfieri Maserati နှင့်သူ၏ညီအစျကိုအောင်မြင်တဲ့ကုမ္ပဏီ၏သရုပ်ဖော်ပုံအဖြစ်။
အချိန်ကျော်မော်တော်ကားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအပေါ်ကားစက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်အခွက်တဆယ်ဘို့မိမိတို့စိတ်အားထက်သန်ကုမ္ပဏီတည်ဆောက်ခြင်းမှလှူဒါန်းခဲ့ core ကိုတန်ဖိုးများ။ ကုမ္ပဏီအတွက်အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအစဉ်အမြဲပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။ အသစ်သောစိန်ခေါ်မှုနဲ့ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများနှင့်ထူးချွန်ဒီကုမ္ပဏီကိုတည်ဆောက်စေ။ 1914 ကတည်းကပြိုင်ကားဝိညာဉျကိုအံ့သြဖွယ်ကုမ္ပဏီတည်ဆောက်။ ဒါကြောင့်သင်ကဒဏ္ဍာရီကုမ္ပဏီ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာချင်ပါတယ်လျှင်။ သင်လုပ်ဖို့ ... လိုပါတယ် အမြင့်ဆုံးအဆင့်မှာသင့် CV နှင့်အင်တာဗျူးကိုပွငျဆငျ.
ဤတွင် Apply: https://www.bugatti.com/contact/
စူပါ, Amazing, စျေးကြီးကားများ။ Bugatti အမှတ်တံဆိပ် ယူအေအီးအတွက်ငှားရမ်းဖြစ်ပါတယ်။ Bugatti အကောင်းဆုံးအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကြှနျုပျတို့သညျဤအံ့သြဖွယ်အမှတ်တံဆိပ်မည်သူမဆိုမှမိတ်ဆက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါသလား ?. မဟုတ်မှာအားလုံးထိုကားများ၏ကုန်ကျစရိတ် 1Million အမေရိကန်ဒေါ်လာအကြောင်းကိုနေကြပါတယ်။ နှင့် ကမ္ဘာအဝှမ်းမှအချမ်းသာဆုံးလူတွေသာ Bugatti သူတို့ကိုယ်သူတို့မဝယ်နိုင်ကြသည်။
ဤတွင် Apply: https://mercedesbenzme.com/me/en/footer/about-us/careers/
အောင်မြင်သောအရောင်းအတှေ့အကွုံအစိုင်အခဲ Track စံချိန်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင် သင်တစ်ဦးအလုပ်ရရှိရန်ကူညီပေးပါမည် Mercedes-Benz ၌တည်၏။ ဒူဘိုင်းအတွက်ရောင်းအားအမှုဆောင်အရာရှိစုဆောင်းကုမ္ပဏီ။ ယခုအချိန်တွင်မာစီဒီးသင်တို့အဘို့လက်လီအခွင့်အလမ်းများပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီဆောင်ပုဒ်ဘယ်တော့မှမတိုင်မီကဲ့သို့သင်တို့အအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပုံဖော်နေပါတယ်။ ဒီအကြောင်းပြချက်ဒါ ရှာဖွေစူးစမ်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများ.
ယေဘုယျခုနှစ်, ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ကုန်သည်ကွန်ယက်ကိုပညာရှိတဲ့ရှေးခယျြမှုဖြစ်နိုင်သည်။ အဆိုပါမာစီဒီးဘ်ဆိုဒ်တွင်, သင်သည်သူတို့၏လက်ရှိအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများမှတဆင့် browse နိုင်ပါတယ်။ သူတို့အခွအေနမြေိုးကိုသင်ပင်လျင်မြန်စွာသတင်းစကားကသူတို့ကိုနိုင်ပါတယ်။ နှင့်သကဲ့သို့သငျရိုးရှင်းစွာ HR Mercedes-Benz မန်နေဂျာရန်သင့်အသေးစိတ်ကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်မှတ်ချက်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ရှင်းမှ, သူတို့ရဲ့ကော်ပိုရိတ်ကွန်ယက်ကို။ ရိုးရှင်းစွာအဆယ်မော်တော်ကားအလုပ်အကိုင်များစျေးကွက်ပါဝင်သည်။ ဘယ်မှာ ၏သင်တန်းကိုသင်အလုပ်တစ်ခုရနိုင်။ Mercedes-Benz တစ်အကြီးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်နှင့်အစဉ်မပြတ်ကြီးထွားလာနေပါတယ်။ စျေးကွက်အင်ဂျင်နီယာအရှေ့အလယ်ပိုင်းကားတစ်စီးကုန်သည်တွေကျော်။ အဆိုပါမာစီဒီးအသစ်များကိုန်ထမ်းအားလုံးဂရုတစိုက်ရွေးချယ်ထားသည်။ သူတို့ရဲ့အံ့သြဖွယ်ရာအရပျမြားနှငျ့စတင် နှင့်ခြွင်းချက်အရောင်းနှင့်ညှိနှိုင်းအဖွဲ့က။
အရှေ့အလယ်ပိုင်းမော်တော်ကားအလုပ်အကိုင်များဒေသ။ လူသိများ Is အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးတစ်ဦးပြည်တော်ပြန်များအတွက်။ ရိုးရှင်းစွာအဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အလုပ်အကိုင်များဆောင်ခဲ့သည့်ပြောင်းလဲနေသောအလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်၏။ ကြောင်းကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ကုမ္ပဏီဒူဘိုင်းမော်တော်ယာဉ်ဈေးကွက်ထဲမှာဒေသခံကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကိုဆွဲဆောင်။ အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်မာစီးဒီးအတွက်ရောင်းအားအနေအထားရတဲ့ပြည်တော်ပြန်၏မြင့်မားသောအရေအတွက်က။ ဒါကြောင့်အခြားလမ်းထားရန်, သင် Mercedes-Benz ၏တဦးတည်းကဒီဒေသအတွင်းရှိလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုရှေးခယျြအလုပ်လုပ်စတင်နိုင်ပါသည်။ သို့မဟုတ် သငျသညျရုံးချုပ်တစ်ဦးရာထူးလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်.
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, Mercedes-Benz ကိုသင်ပေးပါလိမ့်မယ်။ အံ့သြဖွယ်များနှင့်စိန်ခေါ်မှု အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများ။ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရေရှည်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖှံ့ဖွိုးတိုးအတူ။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စ, တိုင်းသစ်ကိုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမုဆိုးအဖြစ် အရှေ့အလယ်ပိုင်း၏စိတ်ဝင်စားဖွယ်ယဉ်ကျေးမှုရှာဖွေစူးစမ်း။ ဘယ်အချိန်မှာသူတို့ကဒီရေတွင်း-rated ကုမ္ပဏီဝင်ရောက်နေကြသည်။
Aston Martin ဒူဘိုင်းအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
ဤတွင် Apply: https://www.astonmartinlagonda.com/careers
ထိုနညျးတူတှငျကြှနျုပျတို့ Aston Martin ကိုတင်ပြ။ တနည်းအားဖြင့်သင်အကောင်းဆုံးအမှုဆောင်အရာရှိအတူအလုပ်လုပ်စိတ်ဝင်စားလျှင်။ Aston Martin စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ကကမ္ဘာ့အများဆုံး rated လူကြီးလူကောင်းရဲ့တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သော Aston Martin အဖြစ်လေးစားဇိမ်ခံမော်တော်ကားအမှတ်တံဆိပ်နှင့်အတူမော်တော်ယာဉ်အခွင့်အလမ်းများ။ သငျသညျအနီးဆုံးအနာဂတျမှာစီအီးအိုဖြစ်လာကူညီပေးပါမည်။
သငျသညျအနုပညာကျွမ်းကျင်မှုရှိပါကနောက်ထပ် key ကိုအမှတ်။ သင်က Aston Martin ဒီဇိုင်းအဖွဲ့က join လို့ရပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီအသစ်ကမော်ဒယ်တွေဖန်တီးပေးပါတယ်။ ထိုအဖြတ်တောက်ခြင်း-အစွန်းနည်းပညာသူတို့နှင့်အတူပေါင်းစပ်။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးလည်းမရှိ ဒူဘိုင်းအသစ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမုဆိုးများအတွက်ကြီးမားသော option ကို။ သို့သျောလညျး,fသင်အင်ဂျင်နီယာအတွေ့အကြုံကိုရှိသည်။ သငျသညျစေ့စပ်လက်ရာလက်နှင့်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့ကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းကိုရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။
တစ်ဦး Aston Martin နဲ့အလုပ်အမှုဆောင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၏ဘာမျှမပြောပါရန်။ သင်တစ်ဦးမန်နေဂျာဖြစ်လာနိုင်ပါသည် သူတို့ရဲ့အရောင်းကိုယ်စားလှယ်အကိုင်းအခက်တဦးတည်းအတူ။ ဤစကားမှန်ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့နေ့တိုင်းဤအကားများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်စစ်မှန်သောအပျြောအပါးပါပဲ။
အားလုံးအထူးအလုပ်လုပ်အထက် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်ပတ်ဝန်းကျင်။ ထိုအစာရှောင်ခြင်း-ပွေးညီ Aston Marin ဒူဘိုင်းကျိန်းသေပြောင်းလဲနေသောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတိုးတက်မှုနှုန်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုဆု။ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်, သင်လုပ်နိုင်သည် ပါကစ္စတန်အလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့လက်ရှိနေရာလွတ်ကိုရှာဖွေ.
ဤတွင် Apply: https://www.audi.com/en/career.html
အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာ Audi ကားနှင့်အတူအများအပြားနေရာလွတ်လည်းရှိပါတယ်။ ဆန့်ကျင်တွင်, ဒူဘိုင်းအတွက် Audi 2005 အတွက် Audi AG ၏အပြည့်အဝပိုင်ဆိုင်သည့်လက်အောက်ခံအဖြစ်ထူထောင်ခဲ့ပါတယ်။ Audi အတွက်အလုပ်လုပ်ပတ်ဝန်းကျင်အလွန်ကောင်းလှ၏။ ဒူဘိုင်း၏အနုတ်လက္ခဏာဘက်ခြမ်းတွင်။ ပိုပြီးဇိမ်ခံအမှတ်တံဆိပ်ရှိပါတယ်။ ဒီတော့အခါသင် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနှင့်အတူစတင်အလုပ်လုပ်။ သင်သည်သင်၏တိုးတက်မှုကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဒေသဆိုင်ရာအရောင်းရုံးရပါလိမ့်မယ်။ သို့သော် Audi ကားနှင့်အတူအပြုသဘောဘက်ထွက်ထောက်ပြရန်။ သငျသညျဒူဘိုင်းကားတစ်စီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏ဗဟိုတွင်အခြေစိုက်လိမ့်မည်။ ထိုအသင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ကျွမ်းကျင်မှုကြီးထွားလာ၏ရလဒ်အဖြစ်ရာထူးတိုးနိုင်ပါတယ်။ ထို့ပြင်, သင်တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာမော်တော်ယာဉ် Audi ကားစျေးကွက်သည်။
အဆိုပါကုမ္ပဏီအားလုံးအရောင်းမန်နေဂျာတာဝန်လုပ်ကိုင်ရန်နှင့် Co-ထုံးစံ။ အသစ်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးသင်တန်းပေး အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်အမှုဆောင်အရာရှိများနှင့်ရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းလှုပ်ရှားမှုများ။ နောက်ထပ် key ကိုအမှတ်သင်သည်လွတ်လပ်သောကုန်သည်တွေအတွက်အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်ဖြစ်ပါသည် ဒေသတွင်း၌သို့မဟုတ်ဆော်ဒီအာရေဗျ။ ဒီတော့အတွေ့အကြုံကသင်၏အလုပ်အနေအထားအပေါ်အခြေခံအများကြီးတည်ငြိမ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
သငျသညျကူညီပေးနေ၏ရည်ရွယ်ချက်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောဘဏ္ဍာရေးအဖြစ်ကုမ္ပဏီ၏အတွင်းပိုင်းယေဘုယျ Audi အုပ်စုတစ်စုလုပ်ဆောင်ချက်များကို၌တည်၏။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ VW တို့ဌာနခွဲသကဲ့သို့ကောင်းစွာဆောင်ရွက်ပါသည်။ ဒါကြောင့်တဦးတည်းအရာများအတွက်, ကအများကြီးဖြစ်လိမ့်မည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိစ္စများ sort ဖို့ပိုမြန်.
နောက်ဆုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခုနှစ်, Audi သည်လက်ရှိတွင်သစ်ကိုဝန်ထမ်းအဖွဲ့ဝင်များရှာဖွေနေ။ သငျသညျသစ်ကိုလုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်ရှာဖွေနေလျှင်အဖြစ်မှတ်ချက်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုမှတပါး, သငျသညျသေးငယ်တဲ့ Audi ကားအသင်းအတွင်းတာဝန်များကိုစိန်ခေါ်အလုပ်လုပ်ချင်ပါတယ်။ သင် ... သင့်တယ် အောက်ပါရာထူးများအတွက်သင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း application ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစား သူတို့ရဲ့ website ပေါ်မှာ။
အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာတာဝန်ရှိသူတဦးက Bentley Motors ကအရောင်းအဖြစ် Bentley ဒူဘိုင်း။ ဒါကြောင့်ဒူဘိုင်းအတွက် Bentley ဖြစ်နိုင်သည် အလယ်တန်းအရှေ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများကိုအဘို့အကောင်းတစ်ဦးရွေးချယ်မှု.
ဒါကကုမ္ပဏီအတွေ့အကြုံကောင်းခေါင်းဆောင်များရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့ client များအတွက်အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံစုဆောင်းရန်အလုပ်လုပ်နေကြသည်။ ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ website ပေါ်မှာကြည့်ရှိသည်နှင့်ကြိုးစားကြ သငျသညျအကောင်းတစ်ဦးအနေအထားပေးဖို့ဟာသူတို့ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုဘုတ်အဖွဲ့စည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်.
ဒီကုမ္ပဏီဟာဒူဘိုင်းမှာလည်းနာမည်ကောင်းတံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ သူတို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်လည်းသင်သည်ကောင်းသောဆက်သွယ်မှုရှိနိုင်သည်။ သူတို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်၍ အမှန်တကယ်ဘာတွေလုပ်နေသည်ကိုလည်းသင်မြင်လိမ့်မည်။ ဒီနဲ့အလုပ်လုပ် ဒူဘိုင်းအတွက်မော်တော်ယာဉ်ကုမ္ပဏီများသည် ပင်လယ်ကွေ့ဒေသအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောမျက်နှာ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အနာဂတျအတှကျတစ်ဦးဦးခေါင်းချဉ်းကပ်မှုအားငါပေးမည်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတအကြီးတန်းရောင်းအားသို့မဟုတ်အင်ဂျင်နီယာဌာန၏အီးမျိုး။
Acura ပိုပြီး Oriental အားကစားဘို့, အားကစားကားများစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်သင်သည်လည်းထိုသူတို့သည်သင်၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခြေအနေအကြောင်းအမြန်သတင်းအချက်အလက်ပေးပို့သင့်ပါတယ်။ သငျသညျ Acura အဖွဲ့သည်အီးမေးလ်ပေးပို့တစ်ခုသို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်ချက်တင်သူတို့နှင့်အတူစကားပြောနိုင်ပါတယ်။
သငျသညျကျိန်းသေဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်သူတို့အဆက်အသွယ်အပိုင်းမှာကြည့်သင့်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ, သို့သော်နှင့်အတူမော်တော်ကားကုမ္ပဏီကြီးများ၏စာရင်းကိုဤ website ကို add သင်၏အကောင်းတစ်ဦးရဲ့တန်ဖိုးကိုရလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါတယ်.
ဒူဘိုင်းမြို့အတွင်းကောင်းစွာ-based ကုမ္ပဏီအဖြစ်။ ဤသည်အမှတ်တံဆိပ်ကြီးမားတဲ့အဖြူရောင် playset နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ဤအဖွဲ့အစည်းသည်အမှန်တကယ်ဖြင့်ကမ္ဘာအဝှမ်းကလူငှားရမ်းသည်။ ဒါကြောင့်သင်အမှန်တကယ်သင့်ထံမှလာဘယ်မှာနေပါစေနေဆဲသူတို့နှင့်အတူအလုပ်ရနိုင်သည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်၏ 80% ကိုသိသည့်အတိုင်း ဒါကြောင့်အိန္ဒိယနှင့်ပါကစ္စတန်ကနေလာမယ့်တာဖြစ်ပါတယ်လုပ်သားအင်အား။ နေပါစေသင်အမှန်တကယ်ဒူဘိုင်းမှရယူရန်ကြိုးစားလျှင်အရာအဘယ်ကြောင့်ဒီအဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဆဲနေတဲ့အခွင့်အလမ်းရှိသည်နှင့်၎င်းတို့၏ website တွင်လျှောက်ထားပါ။ ဒါကြောင့်သင်ကဒူဘိုင်းအတွက် Haygood အသစ်ကအနုပညာကိုငါပေးမည်။
ဤသည်အမှတ်တံဆိပ်အမှန်တကယ်အလွန်သီးသန့်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်လုပ်သားအင်အားအများစုသူတို့နှင့်အတူအလုပ်ရနိုင်ကြဘူး။ သို့သျောလညျးသငျသညျအကောင်းတစ်ဦးအတှေ့အကွုံရှိခြင်းလျှင်ပြီးနောက်သင်ကျိန်းသေတဲ့ရွေးချယ်မှုရှိသည်လိမ့်မယ်နေနှင့် သင်သည်ထိုသူတို့နှင့်အတူတစ်ဦးအလုပ်ရနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဤရွေ့ကားကုမ္ပဏီများသည်အမှန်တကယ်ရုပ်သံလိုင်းအမှုဆောင်အရာရှိပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဒါရိုက်တာများနှင့်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ငှားရမ်း။
BMW ကားကုမ္ပဏီအုပ်စု (ဒူဘိုင်း)
ဤတွင် Apply: https://www.bmwgroup.com/en/careers.html
အားလုံးအရာရှိတဦးက BMW ကား Group မှပြီးနောက်။ ထောက်ပြဖို့သူတို့ဖြစ်ကြသည် ဒူဘိုင်းမြို့အဘို့ထိပ်တန်းတင်သွင်းသူ။ Sharjah နှင့်မြောက်ပိုင်းစော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအခြေစိုက်ကုမ္ပဏီ။ သူတို့အခွအေနမြေိုး AGMC BMW ကား။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်ထို BMW ကားကုမ္ပဏီ 40 အတွက်၎င်း၏ 2016th နှစ်ပတ်လည်နေ့တစ်နှစ်သို့ဝငျခဲ့သညျ။ ရှင်းမှ, BMW ကား AGMC ပစ္စုပ္ပန်အချိန်အထိ။ အဆိုပါကုမ္ပဏီအကြီးထုတ်ပေး ဒူဘိုင်းအတွက်သမိုင်းမှတ်တိုင်များနှင့်အောင်မြင်မှုများ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ကုမ္ပဏီအတိတ်လေးဆယ်စုနှစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပြေး။
စိတ်ထဲ၌ဤအတူ, BMW ကား 40 နှစ်အတွင်းများအတွက်စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲ။ BMW ကား AGMC မော်တော်ကားပရီမီယံကိုအပ်လိုက်ပါတယ် အင်ဒီးယန်းအတွက်လည်းယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အနေရာလွတ်။ BMW ကားများတွင်ရောင်းအားအမှုဆောင်အရာရှိများအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုဈေးကွက်အတွက်အကောင်းဆုံးများထဲမှစေသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, ဖောက်သည်သီးသန့်အားကစားကားများနှင့်အတူမေတ္တာ၌ဖြစ်ကြ၏။
BMW ကား Group မှကားများကိုတစ်ဦးအလွန်ကောင်းသောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းသည် 1976 အတွက်အရောင်းအဖွဲ့ကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ နှင့်အဖြစ်မှန်အတွက်, BMW ကား AGMC ထိုအချိန်မှစ. အရေးကြီးဆုံးထဲကတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါသည် ဘဏ္ဍာရေးရာထူးများအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အစျေးကွက်ပံ့ပိုးပေး။ နှင့်ဤကုမ္ပဏီအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာ BMW ကား Group ကလိုင်စင်ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, 2016 အတွက် AGMC အပြည့်အဝအသိအမှတ်ပြုခံခဲ့ရသည်။ ထိုသူတို့ကနိုင်ငံတကာကိုအကောင်းဆုံးအရောင်းရဆုံးအရောင်းအဖြစ်အမည်ရပါတယ်။
Alfa Romeo အရှေ့အလယ်ပိုင်း
ဒါကကုမ္ပဏီအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအကိုင်းတွေအများကြီးရှိခြင်း။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်ဘာရိန်း, ကူဝိတ်, ကာတာနှင့်လေဗနုန်၌သူတို့ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဒါကြောင့်, အလုပ်ရှာဖွေသူလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရဖို့အဖြစ်သင်တို့အဘို့ရွေးချယ်စရာအများကြီးရှိပါတယ်.
Alfa Romeo, ကကောင်းတစ်ဦးအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အလွန်ကောင်းစွာနဲ့လူကြိုက်များယာဉ်များပြီးသားဒီအမှတ်တံဆိပ်ကုမ္ပဏီ၏ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုအောကျတှငျရောငျးခခြဲ့ဖြစ်လာသည်။ သငျသညျသို့ကဒီမှာရှိနိုင်ပါသည် ဒူဘိုင်း Alfa Romeo။ နှင့်ဤကုမ္ပဏီသင်၏နောက်အလုပ်ရှင်ဖြစ်လိမ့်မည်မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်သင်အတှေ့အကွုံရှိခြင်းနေကြသည်လျှင်သင်ဒီလိုအဖြစ်ကုမ္ပဏီများနှင့်လုပ်ကိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းရလိမ့်မယ်။ အဲဒီမှာထိပ်ပေါ်မှာထောက်ပံ့ပေးမယ့်လင့်ခ်ဖြစ်ပါတယ်, ပြီးတော့ပေါ်မှာစကားပြောဖို့နဲ့ကျေးဇူးပြုပြီး သူတို့ကအလုပ်အပိုင်းအပေါ်ထပ်မံခေါ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မည်။ သင်ဤကုမ္ပဏီနှင့်အတူအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌အံ့သြဖွယ်အလုပ်တစ်ခုရလိမ့်မယ်မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဒူဘိုင်းတွင်တိုယိုတာကားများ al-Futtaim Motors ကမှာသက်ဆိုင်သည်။ ဒါဟာကြီးမားသောအုပ်စုတစ်စုသည်နှင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်းအလုပ်အကိုင်ဈေးကွက်တွင်နေရာလွတ်တွေအများကြီးပေး။ ဒါကြောင့်ဒီအဖွဲ့အစည်းကိုအရည်အသွေးမြင့်တိုယိုတာမော်တော်ယာဉ်များပေးပါသည်။ သငျသညျအတှေ့အကွုံရှိခြင်းနေကြသည်လျှင်အဆင်ပြေမန်နေဂျာမှရတဲ့ပြဿနာတစ်ခုမဖြစ်သင့်ပါတယ်။
စူပါလူသိများတဲ့အဖွဲ့အစည်းက။ အင်တာနက်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအဖြစ်ပဲဒီကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာချစ်ကြတယ်။ ဒါကြောင့်သင်ကဤကဲ့သို့သောထိပ်တန်းကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်အတူအခွင့်အလမ်းရလိမ့်မယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်မော်တော်ယာဉ်ကုမ္ပဏီများကလည်းအမြဲသူတို့၏န်ထမ်းများအတွက်အလွန်အမင်းတန်ဖိုးရှိသောလုပ်ခပေးနေကြသည်။ ထိုအသင်အမြဲအခြားတစ်ဖက်တွင်အကောင်းတစ်ဦးသင်တန်းနှင့်ကောင်းစွာယင်း၏လေ့ကျင့်ရေးတည်နေရာအားကိုမျှော်လင့်နိုင်ပါတယ်။
Cadilac ကုမ္ပဏီမည်သူမဆိုမှမိတ်ဆက်ခံရဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ သင်တစ်ဦးမန်နေဂျာသို့မဟုတ်ရောင်းအားအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်အသစ်တခု Automotive အလုပ်အကိုင်များနေရာလွတ်ကိုရှာဖွေပါ။ ဒါကကုမ္ပဏီလုပ်ဆောင်ချက်သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ Cadilac ၏အမှတ်တံဆိပ်နောက်ကွယ်မှရှည်ဇာတ်လမ်းလည်းမရှိရိုးရှင်းစွာအဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ နှင့်ဥရောပထဲမှာ.
ယခုအချိန်တွင်ကုမ္ပဏီဟာသူတို့ရဲ့ website တွင်ကြော်ငြာမဆိုနေရာလွတ်မရှိဘူး။ သို့သျောလညျးသငျသညျကွညျ့ရှိသင့်နှင့်ပင်အရောင်းအသင်းနှင့်အတူ chat ။ တချို့ကအချိန် စုံလင်သောအလုပ်အကိုင်အများအတွက်ရိုးရှင်းသောအမြန်မေးခွန်းတစ်ခုကိုဆောင်.
Sall မဆိုကားကုမ္ပဏီနိုင်ငံတကာမှာလုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ ဒါကကုမ္ပဏီဖွင့်အော်တိုကားကိုရောင်းချပေါ်တယ်ထက်အများကြီးပိုပါတယ်။ သူတို့ကအခမဲ့ကားတစ်စီးအဘိုးပြတ်ရာပူဇော်သက္ကာကိုနေကြသည်။ ဖောက်သည်များကသူတို့စျေးနှုန်းတွေကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်အခြားလူများဟုနေကြတယ်ဆိုတာကိုမြင်နိုင်ကြသည်။ မရှိအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အအပိုင်းဖြစ်ပါသည်ဒါပေမယ့်သူတို့ကိုသင်တစ်ဦးအမြန်အီးမေးလ်ကိုတောငျးဆိုခကျြကိုအသုံးပြုတဲ့အခါအလုပ်မလုပ်သင့်ပါတယ်။
အော်တို Trust မှဘက်စုံန်ဆောင်မှုများ
ဤတွင် Apply: https://www.autotrustuae.com/career
ဒါကကုမ္ပဏီ AW Rostamani Automotive Group ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သို့သျောလညျး ဒါဟာသူတို့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အအပိုင်းမှာရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျိန်းသေဒီကုမ္ပဏီတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်မော်တော်ကားစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်သင့်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တည်ငြိမ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီစျေးကွက်အကြောင်းပြောနေတာဖြစ်ကြောင်းအထူးသဖြင့်ပါ။
အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာ Copart ယင်း၏နေ့တိုင်းနီးပါးရောင်းချ 200 ယာဉ်များကျော်ရှိပါတယ်။ နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော, ဒီကုမ္ပဏီကောင်းတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် အလုပ်အကိုင်အများအတွက်ကြည့်ရှိသည်ဖို့ရာအရပျ.
အဆိုပါ Copart ကုမ္ပဏီမော်တော်ယာဉ်ပိုင်ရှင်များအတွက်ဦးဆောင်အွန်လိုင်း Re-ကြော်ငြာကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သူတို့စတင်ခဲ့ပါပြီကတည်းကဒါဟာပေါ်တယ်2သန်းမော်တော်ယာဉ်များနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း Over-အရောင်းရဆုံးပြန်လည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ယခုအချိန်အထိကမ္ဘာ့တစ်လွှားထက်ပို 170 အဆောက်အဦကသူတို့ရဲ့ website သို့တခုတခုအပေါ်မှာကြော်ငြာတင်နေကြသည်။
အဆိုပါကုမ္ပဏီ stats 2012 အတွက်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါ Copart အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှ၎င်း၏အရင်းအမြစ်များကိုထွက် branched ။ ဒါကကုမ္ပဏီပိုပြီးပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံများရှိဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမျှော်လင့်။
အယ်လ် Shamali အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ Group မှ
ဤတွင် Apply: http://www.alshamaligroup.com/careers.php
ကအယ်လ် Shamali အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ Group မှဖြစ်လိမ့်မည်အလုပ်အကိုင်စတင်ရန်နောက်ထပ်ကောင်းသောကုမ္ပဏီ။ ဒါကကုမ္ပဏီကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဒူဘိုင်း၏ဘဏ်, အဆောက်အဦး, Baniyas ရင်ပြင်, Deira, ဒူဘိုင်းအတွက်အံ့သြဖွယ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများကမ်းလှမ်း။ ဒါကြောင့်, သင်ယူအေအီးအတွက်အခွခေံလျှင်။ သငျသညျကျိန်းသေပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကြည့်သို့မဟုတ်အွန်လိုင်း၎င်းတို့၏မန်နေဂျာနှင့်အတူချိတ်ဆက်သငျ့သညျ။
ဒါဟာကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းကိုအာရုံစူးစိုက်အလွန်ဖောက်သည်ဖြစ်ပါတယ်။ အမြဲတမ်းလက်ျာဘက်ချဉ်းကပ်မှုနှင့်အတူရှေ့သို့ရွေ့လျားခြင်းနှင့်ရှာဖွေနေ စိတ်အားထက်သန်ကျွမ်းကျင်သူများ, လုံ့လရှိသူအလုပျသမား, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အသင်းကစားသမားများအတွက် ဒူဘိုင်းမြို့မှာသူတို့ရဲ့ဖောက်သည်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုပေးအပ်များအတွက်စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်အတူ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဒီကုမ္ပဏီကအရမ်းလွယ်ကူပါတယ်စုဆောင်းမှုဖြစ်စဉ်ကိုရှိပါတယ်။ သင်ပြုသမျှအားလုံးသည်ရုံသူတို့ကိုကိုယ်ရေးရာဇဝင် post ဖြစ်ပါတယ်။
AW Rostamani Group မှ
သူတို့ကကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ်ဖို့အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၌ခိုငျမွဲကိုသိအခြားဖြစ်ကြသည်။ AW Rostamani Group မှကျိန်းသေထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့ယူထိုက်သည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီမဆိုရောင်းအားကုမ္ပဏီမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်ရန်။ ဒါကြောင့်သင်ကမော်တော်ကားလုပ်ငန်းအင်ဂျင်နီယာအတွေ့အကြုံကိုရှိခြင်းလျှင်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီများကထောက်ပံ့ပေး link ကို Apply ။ ထိုအဇope သင်သည်အိပ်မက်ကုမ္ပဏီအတွက်အလုပ်ရကြလိမ့်မည် ထိုကဲ့သို့သော AW Rostamani Group မှဖြစ်သည်။
RMA Motors က
RMA Motors ကပရီမီယံလူတန်းစားကားများရောင်းချခြင်း။ အဆိုပါကုမ္ပဏီယူအေအီးဈေးကွက်ထဲမှာကားများဝယ်ယူရောင်းချနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပွငျယာဉ်ငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်းအဟောင်းလက်ခံရောင်းအား။ ဒီတော့ယေဘုယျအားဖြင့်ဟော ပြော. အ, ကသူတို့ကိုဖုန်းခေါ်ပေးရကျိုးနပ်ပါလိမ့်မည်။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့အဖွဲ့ကိုစစ်ဆင်ရေးပိုပြီးပညာရှင်များရှာဖွေနေပါသည်။ ဒါကြောင့်သင်ကအဆင့်မြင့်ပေါ်အီလက်ထရောနစ်နှင့်ကားတစ်စီးအင်ဂျင်စီမံခန့်ခွဲဖို့ဘယ်လိုသိကြပါလျှင် သငျသညျကျိန်းသေသူတို့နှငျ့အတူအကောင်းတစ်ဦးအင်ဂျင်နီယာအနေအထားကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်တယ်.
ယခုကြှနျုပျတို့ဒူဘိုင်းအတွက် Automotive ဂျော့ဘ်များအတွက်စုဆောင်းကြသည်!
ယူအေအီးအတွက်မော်တော်ယာဉ်အလုပ်ရှာဖွေရေး - Porsche နှင့် Ferrari ပြိုင်ကားယူအေအီးအတွက်ဂျော့ဘ်
ဒူဘိုင်းအတွက် Automotive ဂျော့ဘ်များအတွက်ယူအေအီး
သင်ကရှာတွေ့စေချင်ပါနဲ့ ဒူဘိုင်းယောဘ? ဤစကားမှန်ပေမည်ဖြစ်သော်လည်းကျနော်တို့ကိုသင်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ ရိုးရိုး အဆိုပါအသစ်တစ်ခုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်ရန် ယူအေအီးသို့မဟုတ်ကူဝိတ်။ သေချာသည်သင်တို့လည်းငှားရမ်းကုမ္ပဏီများသည်ကိုကြည့်သင့်ပါတယ်။ သင်သွားမီ, ကြည့်ကြ ဒူဘိုင်း no.1 ကုမ္ပဏီ နှင့် ယူအေအီးအတွက်စုဆောင်းမှုများအတွက်အလုပ်အကိုင်အ site ကို။ သူတို့ကသင်၏ CV နှင့်အတူလျှောက်ထားရန်ကယ့်ကိုထိုက်တန်ဖြစ်ကြသည်။
ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း Upload လုပ်ပါ ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်စီးတီးကြီးထွားလာအမြန်ဆုံးပါ! - ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ။